जाडोमा पिस्ता खानुका यी हुन् चमत्कारी फाइदा ! « News24 : Premium News Channel
जाडोमा पिस्ता खानुका यी हुन् चमत्कारी फाइदा !
काठमाडाैँ । जाडो मौसममा स्वस्थ रहन पिस्ता (पेस्ता) को सेवन निकै फाइदाजनक मानिन्छ । पिस्ता एक प्राकृतिक फल हो, यसमा गरम तत्व हुने भएकाले गर्मीमा भन्दा चिसो मौसममा खानु लाभदायक मानिन्छ । स्वादिलो परिकार तयार पार्न पिस्ताको प्रयोगलाई प्रमुख स्वादका रूपमा सेफहरूले लिने गरेका छन् । पेस्ताको स्वाद मन नपराउने हामीमध्ये थोरै मात्र होलान्, ठूला-साना सबै होटलका सेफहरु समेत पिस्ताकाे बखान गर्छन् ।
हरियो सागपातमा जस्तै पिस्तामा पनि प्रोटिनको मात्रा लुकेको हुन्छ । र, यसको सेवन साकाहारी तथा मांसाहारी दुबैथरीका मानिसका लागि लाभदायक नै मानिन्छ । किनकि यसको प्रयोग माछामासुको सट्टामा समेत गर्न सकिन्छ ।
जाडोमा पिस्ता खाँदा हुने फाइदाहरु–
– पिस्तामा फाइबर, प्रोटिन, भिटामिन सी, जिंक, कपर, पोटासियम, आइरन, क्याल्सियम र अन्य धेरै पोषक तत्वहरू पाइन्छन् । यसले तपाईलाई स्वस्थ मात्र राख्दैन, धेरैजसो रोगलाई पनि टाढा राख्छ ।
– यसमा पाइने फ्याटी एसिड पाइन्छ, जुन हाम्रो स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ । तपाईको छालालाई स्निग्ध र मुलायम बनाइराख्न यसले मद्दत गर्छ, जसले गर्दा छालामा प्राकृतिक चमक कायम रहन्छ । यसका साथै शरीरका अन्य अंगहरूमा स्निग्धताका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ ।
– पिस्तामा प्रचुर मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ, जुन आँखाको स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यस तत्वले तपाईलाई जवान राख्न समेत मद्दत गर्छ । यसले छालामा चाउरी पर्ने गतिलाई कम गर्छ र छिटो बूढो हुनबाट जोगाउँछ ।
– पिस्ता कपाल झर्नबाट बचाउनका लागि पनि निकै फाइदाजनक हुन्छ । कपालका लागि यसलाई नियमित सेवन गर्न सकिन्य, या पिँधेर पेस्ट बनाएर कपालमा लगाउन सकिन्छ ।
– घामको किरणको असरबाट बच्न पनि पिस्ताको प्रयोग निकै उपयोगी हुन्छ । यसलाई चारोलीको साथमा दूधमा पिसेर पेस्ट बनाउनुहोस् र प्याकको रूपमा लगाउनुहोस् । नियमित रूपमा यसो गर्नाले छालाको रङ गोरो हुन थाल्छ ।
– जाडो मौसममा मुटु रोगीका लागि समस्या बढ्छ । तर पिस्ताको सेवनले मुटुका बिरामीलाई फाइदा हुन्छ, किनभने पिस्ताले खराब कोलेस्ट्रोल घटाएर राम्रो कोलेस्ट्रोल बढाउने काम गर्छ ।
– वटा पिस्ताको नियमित सेवनले शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा पनि बढाउँछ । साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि मजबुत बनाउँछ र रोगबाट हामी जोगिन सक्छौँ ।
– पिस्ता कुनै पनि ‘ब्रेन टोनिक’भन्दा कम छैन, यो एकदमै पौष्टिक छ । यसको सेवन गर्नाले दिमाग तेज हुनुका साथै सोच्ने र स्मरण गर्ने शक्ति पनि बढ्छ । त्यसैले जाडो मौसममा नियमित रूपमा पिस्ताको सेवन गर्न सकिन्छ ।
– जाडो मौसममा तौल चाँडै बढ्छ । तर यदि तपाईंले आफ्नो आहारमा पिस्ता समावेश गर्नुभयो भने तौललाई सजिलै नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । किनभने पिस्ता खाएपछि लामो समयसम्म भोक लाग्दैन र पेट भरिएको महसुस हुन्छ, धेरै खान नपरेमा तौल बढ्दैन ।
– जाडो मौसममा तौल घटाउन वा स्थिर राख्न चाहनेले समेत पिस्ता सेवन गर्नुपर्छ । यो कम क्यालोरी र उच्च प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो ।
– केही निश्चित प्रकारका खानेकुरामा उपलब्ध फेनोलीक भन्ने तत्व पेस्तामा पनि उपलब्ध छ जसले शरीरमा विषादीनाशकको काम गर्छ । विषादीनाशक गुणले शरीरमा तनाव उत्पन्न हुन दिदैन जसका कारण क्यान्सर तथा मुटुजन्य रोगले घर बनाउन सक्तैन ।